yokugezela sekukonke: bezikhali nethemba lokuhle
Nge nokukhula ngokushesha komnotho China sika kanye ukunwetshwa ezimakethe, angaphandle sanitary ware brand baye nabomalukazana babo nabo bangena emakethe yasekhaya, futhi baye esephendukela ezifuywayo ephezulu emakethe. Lapho ebhekene mncintiswano zangaphandle, sanitary ware amabhizinisi China kufanele athole enye indlela uqale ukucabanga ukuthi ungadala kanjani indlela yokuphuma.
Lo rise angaphandle sanitary ware brand ahlaselayo brand kazwelonke
Lapho sibhekene nenhlekelele kwalethwa umncintiswano angaphandle sanitary ware brand, lo international ware sanitary brand emizini-lokuqala uqimba e China aqala ukuba nomuzwa wokuthi thunzi futhi sebephendukela ezimakethe lesibili nelesithathu abaphuma. Ngaphezu kwalokho, bababukela ngokushesha baqala ukwakha elihambisana amasu marketing kanye yokuthengisa ukuqinisekisa ukuthi emakethe lokuqala umugqa akazange alahlekelwe, kuyilapho ekwandiseni share emakethe of izimakethe lesibili nelesithathu abaphuma.
Nokho, nemithethonqubo kanye nokuphathwa nemigomo ingcebo market China eziye zaholela ekuncishisweni okuqhubekayo ephezulu ekupheleni ingcebo ezifana Villas, kanye nokuntuleka yokuthengisa ephezulu ekupheleni izindlu kwezohwebo emizini lokuqala nelesibili abaphuma, ngaleyo ndlela ngokuhudula phansi ephezulu ware sanitary emakethe nokukubangela ekuhlehleni. Njengamanje, yasekhaya owaziwa ekhaya ngcono imikhiqizo baye abamba le ephezulu ware sanitary emakethe, okuyinto has nomthelela omkhulu wamazwe omhlaba sanitary ware brand.
Ngesikhathi esifanayo, ne ukuthuthukiswa ngokushesha sanitary ware umkhakha China sika, sekube brand ezidumile ezifuywayo ezifana Wrigley futhi Jiu Mu. Abaningi ephezulu amahhotela namahhotela aseqalile aphonse hydrangea ukuba brand ezifuywayo nge high amanani aphansi. Ukwanda lemikhiqizo kazwelonke inkunzi isikhundla semvelo sawo ngamazwe sanitary ware brand.
isikhathi Iposi: Jan-18-2019
Taizhou Langle yenhlanzeko Wares Factory.
Umthengi funa smart yokugezela entsha sou ...
Ngokwemibiko ye-onegunya iwebhusayithi portal inhlolovo, ukuvikeleka kwemvelo, ukongiwa amandla nokuhlakanipha babé kwagxilwa abathengi 'e Ware sanitary kule minyaka emibili edlule, futhi iphuzu ...
yokugezela sekukonke: bezikhali kuyinto optimi ...
Nge nokukhula ngokushesha komnotho China sika kanye ukunwetshwa ezimakethe, angaphandle sanitary ware brand baye nabomalukazana babo nabo bangena emakethe yasekhaya, futhi baye esephendukela ezifuywayo ephezulu emakethe. Ngo ...
Imboni yokugezela is ubambeke ku-̶ ...
Kuyini ikusasa umkhakha China sanitary? Yiqiniso, eliqhakaze ngempela. Ngoba lokhu ikwenze kuhambe ezingeni China usheshisa, China lengenako yasendlini ukusetshenziswa likhula ngokushesha. Therefo ...
Indlu yangasese waistline design ephula umthetho ...
Ngokuvamile, umugqa zokuhlobisa eyodwa kuphela isetshenziselwa odongeni kobuso isikhala, okuyinto ahlelwe ngesikhathi isikhundla 0.8 kuya 1 imitha kusuka emhlabathini, ebizwa nangokuthi umugqa okhalweni. Isikhundla waistline Tile nje ...
© Copyright - 2019-2010: Wonke Amalungelo Agodliwe.